iPad Pro - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPad Pro efa eto io. Ny kinova matihanina amin'ny takelaka Apple dia mivoaka matanjaka noho ny efijery 12,9-inch sy ny 2.732 x 2.48 teboka vahaolana, zavatra manome hakitroka 264 teboka isaky ny santimetatra.
Raha te hiala moramora amin'ny iOS 9 sy ny efijery goavambe dia tonga miaraka amin'ny Chipset Apple A9X izay mampanantena ny hampitombo 1,8 ny zava-bitany mikasika ny Apple A8X. Mikasika ny GPU, ny fiakarana kalitao dia zava-dehibe ihany koa hahafahana mankafy lalao na fampiharana matihanina amin'ny fanitsiana horonan-tsary, famolavolana sary, automatique birao ary maro hafa.
Mikasika ny fizarana sary, ny iPad Pro dia manana a Fakan-tsary fakan-tsary 8 Megapixel iSight any aoriana izay manome solomaso f / 2,4 ny solomaso. Izy io dia afaka mandrakitra horonantsary amin'ny Full HD amin'ny 30 fps na mihetsika miadana amin'ny 120 fps.
Na eo aza izany fampisondrotana izany dia manolotra a ny iPad Pro mizaka tena hatramin'ny 10 ora fampiasana mitohy.
Apple Pencil ho an'ny iPad Pro
Ny efijery iPad Pro dia azo ampiasaina miaraka amin'ny Apple Pencil, stylus vaovao avy amin'ny orinasa paoma izay manome toky fa hanaiky ny toerana, ny fironana ary ny tsindry apetratsika amin'ny tendrony.
Raiso an-tsoratra na sary amin'ny iPad Pro Mampanantena izy io fa ho traikefa miavaka amin'ity fitaovana ity izay tsy maintsy hividianantsika misaraka nefa mbola ho lasa kojakoja ilaina amin'ny maro izy io.
IPad Pro Fahafahana
IPad Pro dia ho hita amin'ny volafotsy, volamena, na volondavenona manomboka amin'ny volana novambra izao:
WiFi 128 GB + 4G.
Ny AirPods Pro vaovao sy ny iPad Pro miaraka amina vera indray dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny 2022 hoy i Mark Gurman
ny Ignacio Sala hace Andro 2 .
Tamin'ny fehezanteny farany, maro ireo mpampiasa nanantena fa mandritra ny hetsika dia hanolotra ny taranaka fahatelo andrasana i Apple ...
Ny iPad iPad 2020 dia misy ankehitriny ao amin'ny faritra nohavaozin'i Apple
ny Jordi Gimenez hace 1 volana .
Ny lisitr'ireo vokatra nohavaozina sy nohavaozina nataon'i Apple dia mitombo hatrany. Amin'ity tranga ity dia nanampy ny orinasa Cupertino ...
Logitech Combo Touch, ny keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Pro
ny Luis Padilla hace 2 volana .
Lululook dia manolotra antsika hijoro ho an'ny iPad vita amin'ny aliminioma tanteraka ary mampiasa andriamby mahery hitehirizana ny ...
HoveBar Duo avy amin'ny South South, fijoroana ho an'ny fampiasana azonao eritreretina
ny Luis Padilla hace 3 volana .
Notsapainay ny HoverBar Duo avy amin'ny South South, toerana voatonona izay mamela anao hametraka ny iPad amin'ny haavo samy hafa sy ...
Doka "mihira" ho an'ny iPad Pro izay anehoan'ny Apple ny fahaizany
ny Jordi Gimenez hace 3 volana .
Azontsika antoka fa mihoatra ny iray amin'ireo nanatrika no mbola mieritreritra fa tsy hita ny iPad Pro natomboka tamin'ity taona ity ...
ny Toni Cortés hace 4 volana .
Efa manana ny iPad Pro vaovao eo amintsika isika. Natolotra, nanafatra ary natolotra. Ary toy ny mahazatra, ny tovolahy avy ...
Satechi dia manolotra alim-pandehanana alimina alimina ho an'ny iPad Pro miaraka amin'ny seranana 6
IPad Pro miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby dia ho tonga amin'ny 2022
ny Luis Padilla hace 4 volana .
Araka ny voalazan'i Bloomberg, amin'ny herintaona dia ho tonga ny iPad Pro vaovao miaraka amina lamosina vera sy famandrihana tsy misy tariby, ho an'ny ...
IPadOS 14 dia mametra ny habetsaky ny fahatsiarovana azo ampiasain'ny rindrambaiko amin'ny iPad Pro 2021
Tamin'ny fanombohana ny laharana iPad Pro vaovao, dia nanambara ampahibemaso i Apple tamin'ny farany hoe firy ...
Manana mikraoskaopy miafina ve ny iPad Pro? Toa izany
ny Miguel Hernandez hace 4 volana .
Androany izahay mitondra anao ny iray amin'ireo vaovao izay tsy mitsahatra ny manaitra ahy eo am-panoratako azy. Fantatray…